Madaxweynuhu Isagaa naga Yaqaan Ra�iisulwasaarihiisa...
London, UK | Nov 14, 2005
Waxaa jirtay in markii la magacaabay ra�iisalwasaaraha in labada dhinac laga kala dhigay labo nin oo kala ah �Professor� Juriille iyo Baribari. Juriille wuxuu u raacaa meel kasta oo uu Geeddi aadayo sidii isagoo usha u haya halka Baribari uu �carrabka u hayey� oo uu afhayeen u ahaa sidii markii uu ka hadlayey qaraxii garoonka Istaadiyo Muqdisho. Waxaan ku jiray dadkii ugu hor qeyliyey oo lahaa maxaa Geeddi labadan nin loogu daray laakiin markaan dhegeystay jawaabtii uu Geeddi ka bixiyey arrimaha Somaliland markii British Broadcasting Corporation wareysatay ayaan ogaaday in Geeddi u baahnaa af-hayeennimada Baribari. Wuxuu yiri: haddii Somaliland la aqoonsado waan aqoonsaneynaa!
Inkastoo waddaniyiin badani arrinkaas ka hadleen ayaa waxaa si cad qoraallo u soo saaray dadweynaha Soomaaliyeed ee kasoo jeeda Sool, Ceyn, Howd iyo Sanaag qaarkeed iyagoo dalbanaya in ra�iisulwasaaruhu is celiso sidoo kalana raalligelin bixiyo. Waxaase iga yaabiyey, weli jawaab lagama hayo madaxda, siyaasiyiinta, xildhibaanada Puntland inteeda kale! Xataa boggagga internetka ee Puntland inteeda kale wax kama oran arrintaas marka laga reebo Asad Caddaani oo Radio Laascaanood lagu yiqiin.
Hadalka Geeddi kasoo yeeray, qofkii caqli lehina waa ogyahay kii doqon ahna loo sheegimaayo. Marar badan oon ka hadlayey qiimaha waddanka iyo qarannimada ayaan sheegay inaan Soomaali badan aysanba fahmin sharafta iyo qiimaha waddanka. Waxaa taas u daliil ah siday u aammusanyihiin siyaasiyiin badan oo u dhalatay Puntland marka laga reebo kuwa gobolladaan soo sheegnay.
Maaddaama ay awal jireen xildhibaanno ka soo horjeeday siyaasadda Geeddi ayaa waxaa fiican inay hadda kusoo biiraan kuwa ka damqanaya hadalka Geeddi ee ku aaddanaa Somaliland iyo sidoo kale dhulka Soomaaliyeed ee ku hoosjira gumeysiga. Micnuhu maahan in xildhibaannadu raacaan fikradda qolyaha Xamar jooga ee waa la isku danaystaa. Marka si Geeddi hadalkaas loogu ciqaabo waa in jagadaas laga ceyrshaa. Arrintaas waxay rabtaa in loo diyaariyo doodo iyo shirar si xildhibaannada loogu iftiimiyo in Geeddi galay khiyaano qaran isagoonba meelna xukumin. Marka hadda laga bilaabo, qof kastoo Soomaaliyeed oo waddani ah waxaa laga rabaa inuu ka dhiidhiyo arrintaas oo uu ka qeybqaato jawaab-ka-bixinta arrintaas. Barbarkey ka baxdaa waa bakeylo qaleen.
Inta xildhibaannadu u jawaabayaan Geeddi ayaa waxaa madaxweynaha laga rabaa inuu magaaco afhayeen u hadla Geeddi amaba uu Baribari usoo cesho si khalad noocaas ahi u dhicin. Maaddaama uu madaxweynuhu Geeddi keenay isna waa inuu sii toshaa kaftantiisa ileyn mooshinka ku xiga ayaa waxaa la helayaa xildhibaannadii Geeddi taageersanaa oo u diyaar ah iney ridaan madaxweynaha.